fanazaran-tena hatao amin'ny gym izay tena feno | Bezzia
Fanatanjahan-tena hatao amin'ny gym izay tena feno
Susana godoy | 06/04/2021 16:00 | fanatanjahan-tena
Raha mbola tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana amin'ny gym, dia manampy anao amin'izany izahay. Satria marina fa indraindray dia manomboka manao andiany isika, mampiofana vondrona hozatra iray fotsiny ary ny zavatra tsara dia manokan-tena amin'ny maro isika, na mifandimby azy ireo mandritra ny andro na amin'ny fiofanana, araka izay itiavanao azy. Te hahafantatra ny fanazaran-tena hatao amin'ny gym?
Azo antoka fa maro amin'izy ireo no efa fantatrao, fa holazainay aminao kosa hoe iza amin'ireo no mety ho feno indrindra aminao. Araka izany, ho afaka hamela ny fanazaran-tenao havaozina tanteraka ianao na havaozina, fantatrao izany amin'ny fampiharana vitsivitsy fotsiny dia hampiharinao amin'ny vatana manontolo. Tsy iray amin'ireo hevitra lehibe ve izany? Aza adino izay rehetra manaraka.
1 Gazety miaramila, fampihetseham-batana ho an'ny soroka
2 Misintona ny lamosina
3 Bench press eo anelanelan'ny fanazaran-tena hatao amin'ny gym
4 Mampiasà ny lamosinao sy ny tongotrao amin'ny fiandrasana maty ianao
5 Squats Barbell
Gazety miaramila, fampihetseham-batana ho an'ny soroka
Angamba ao an-trano tsy manana lanjany na bara ianao, ka iray amin'ireo fanazaran-tena tokony hatao ao amin'ny gym dia ity. Momba an'io gazety miaramila izay hampihetsi-po antsika. Na dia ho tafiditra amin'ny fomba iray aza ny lamosina. Mba hanaovana izany dia afaka mandray lanja vitsivitsy na dumbbells isika amin'ny tanana tsirairay, na dia tianao kokoa aza ny manampy ny tenanao amin'ny bara ary mametraka kapila isaky ny faran'ny. Io dia hahafahanao mampiakatra ny lanjany mifanaraka amin'ny ilainao. Ny fanazaran-tena dia ny fitazonana ny kiho hiondrika, hitazona ny tanana ho amin'ny tratrany, hivezivezy hampiakatra ny sandry ambonin'ny lohany, hahatratra azy ireo. Fanentanana miakatra izay ho tratrarintsika amin'ny famerimberenana matetika.
Misintona ny lamosina
Mety ho manana fitaovana ho azy ireo eo amin'ny rindrin'ny tranonao koa ianao, na dia ao amin'ny gym aza dia holazainay aminao fa hanao izany ianao. Na izany aza Izy io dia iray amin'ireo angatahina indrindra hahafahana miasa any aorianaa, manana mpanaratsy maro koa. Satria tsy mora foana ny mahazo azy ireo. Hatramin'ny fotoana hivoahan'izy ireo dia ho hitanao fa ny manaraka dia mbola ho tsara kokoa noho ilay teo aloha sy ny antony manosika, betsaka kokoa. Fanatanjahan-tena tanteraka satria ny sandry ary na ny core aza dia ho tafiditra ao.
Bench press eo anelanelan'ny fanazaran-tena hatao amin'ny gym
Eny, iray amin'ireo fanta-daza sy feno indrindra izy io. Hatramin'ity tranga ity hampiasa ny pectoral ary koa ny soroka. Mba hanaovana izany dia mila mandry eo an-damosina eo amin'ny dabilio isika. Avy eo, apetraho tsara amin'ny tany ny tongotrao, ampifanaraho amin'ny glutulao ary apetraho ny scapulae anao. Hala ny bara sy ny lanja izay hidinanay mankany amin'ny haavon'ny sternum na ambany kely kokoa. rehefa tonga eo isika dia hiakatra amin'ny ambany isika amin'ny alàlan'ny fanentanana, saingy eny, hihena kokoa ny fihenana. Ny fifohana rivotra sy ny fifantohana dia tsy maintsy miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra mba tsy hahavery fandanjana.
Mampiasà ny lamosinao sy ny tongotrao amin'ny fiandrasana maty ianao
Eny, izy dia iray amin'ireo lehibe izay tsy te-tsy hahita an'ity matso fanazaran-tena ity koa. Na ny lamosina, na ny valahana na ny lumbar ary koa ny tongotra dia hijaly amin'ny fampiharana ny maty. Azonao atao izany amin'ny dumbbells sy amin'ny bar, araka ny safidinao malalaka. Rehefa mampidina ny lanja amin'ny tanantsika isika, dia tsy maintsy miolikolika ny tongotra, ary mihazona mahitsy ny lamosina ary somary ampifanarahintsika kely ny vatana. Saingy tadidio fa tsy maintsy atositosika hiala ny tratranao, mba tsy hanosika ny bara hidina lavitra be. Handeha hanakaiky ny vatana araka izay azo atao isika mba hisorohana ny fihetsiketsehana mety hanimba ny lamosintsika.
Amin'ity tranga ity, ankoatry ny tongotra, dia handeha hiasa ny quadriceps ihany koa isika ary mazava ho azy, ny faritra misy ny lumbar. Ka io dia iray amin'ireo lehibe hafa ananantsika eo amin'ny fiainantsika sy anisan'ny fanazaran-tena hatao ao amin'ny gym. Ity dia ohatra iray hafa mazava tsara fa tsy maintsy ataontsika mahitsy ny lamosintsika, raha tsy misokatra loatra ny tongotra na ny lohalika. Tsy maintsy esorinao izany rehefa midina ianao dia manao ny tsy mety amin'ny fampifanarahana ny lohalinao na fihetsika be loatra. Noho izany dia tsy maintsy manitsy ny lanja isika satria manana fanazarana bebe kokoa na latsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » fanatanjahan-tena » Fanatanjahan-tena hatao amin'ny gym izay tena feno
Zavatra 5 tokony hataonao isan'andro mba ho salama
Ny anton'ny fahombiazan'ny andiany 'Ginny sy Georgia' ao amin'ny Netflix